iitoto ezinentsingiselo - i-Tattoos Art Ideas
Intsingiselo ye tattoo yaseJapane
Iidatto zaseJapan zidumileyo kunye neentsingiselo ezininzi kunye nenjongo. I-tattoo yaseJapan ivela kwiimo ezahlukeneyo kunye nobukhulu. Izinto ezibonisa tattoo kwakhona zixelele amabali angokomfanekiso afana neentlanzi zeKoi nodrako. Inamba inxulunyaniswa nobutyebi, i-ferocity kunye namandla. Xa ubona iittoti ezinomdla kwaye zithandeka ngokukhethekileyo, zinyanzeliswa ukuba zibuze intsingiselo ye tattoo. Kukho kuphela amathandisi ambalwa awenza ukuba ufuna ukuyeka kwaye ufuna iinguqu zabo. Enye yee tattoos yile tattoo yer dragon ezayo kwiintlobo kunye nezitayela. Indlela odweba ngayo itekisi iya kukushiya uyayixabisa into yokuba iyingqungquthela kwaye inhle.
Iintlanzi zeKoi zinokuhluka kobuninzi obukhulu kunye nombala kunye neentsingiselo. Abanye abantu abembetheyo bathi kubangelwa umzabalazo abajongene nabo ukuba basebenzise inki, ngelixa abanye basebenzisa ukuba baqinisekise ukuba yonke into iya kuba yinyani. Kungathi ulwalamano, uthando olunomdla, ukuzimela, amandla, inhlanhla, ubomi obude, ukuchuma, ubukhulu kunye nokuqhubela phambili. Kukho ama-Tattoos amaninzi aseJapan anentsingiselo enzulu kwaye ehlala njalo ongathanda ukuyenza ngokwezifiso.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango ye-japanese tattoos ngcamango yamadoda nabasetyhini.
Cofa apha ukuze ukhangele imilomo yangoku yakhutshwa ingcinga yamadoda kunye nabasetyhini.
Semicolon tattoo intsingiselo
I tattoo ye-semicolon ingaba yincinci kodwa intsingiselo yinto enkulu. I-tattoo ithatha ingqalelo enkulu kwaye isetyenziswe ukumela umlutha, ukuxinezeleka, ukuzilimaza, ukuzibulala kunye nokuthanda ukuqhubeka nobomi. I-semicolon ithetha ngentsingiselo yobomi, ukuqinisekisa abantu ukuba isiphelo asizange sifike. Namhlanje, i-semicolon ibe yinto yokwakheka kwe tattoo ukuba abo banzima ukuhlala basebenzise ukukhumbuza bona banento yokuphila. Kukho ubukhulu obuhlukeneyo bala tattoo kwaye nguwe oya kuthatha isigqibo sokuba ufuna ukuba i-semicolon yakho ibonakale njani. Ekupheleni kosuku, i-semicolon imelela into ebalulekileyo kwaye inenjongo enokuyiqonda.
Abo batyunjweyo bangayinayo le tattoo ukuba baxelele ukuba bakuphi. Umnxeba udidi kunye kwaye unokukhuthaza abantu ukuba balandele amaphupha abo. Unokwenene ufumane ukuphefumlelwa okufunekayo xa uyayine le tattoos emzimbeni wakho. Kuthatha malunga nokongamo lwaloo mntu uyinki. Kuthatha malunga nokuzilawula kunye nokuthetha ngokuvuleka komntu onobumba.
Cofa apha ukuze ukhangele i-semicolon tattoos ngcamango yombono wamadoda nabasetyhini.
Amathambo amancinci anentsingiselo
Amathambo amancinci anentsingiselo anokukunceda ukumela izinto ezininzi ezenzeka kuwe. . Uninzi lwabantu abayinto enokukholelwa ukuba lunempembelelo phezu kwamagunya asezulwini kunye neenkwenkwezi, lithetha imbali kunye nesayensi. Abantu abasebenzisa le tattoo abanakunomdla kwiingcaciso ezingentla apha ngenxa yokuba itekisi yenyanga ineentsingiselo ezininzi. I-lotus eluhlaza ibonisa ukulawulwa kokomoya ngaphezu komzimba. Imele ubulumko, ingqiqo nolwazi. I-lotus enombala obomvu ibonisa imbonakalo yentsomi kwikolo. I-tatto tattoo ithetha ukuba kukho ithemba kwixesha elizayo. Ikhono le-octopus ukwenza izinto ezininzi kunye neenyawo zalo ezininzi zenza abantu bakholelwe ukuba isidalwa sisininzi. I-tattoo yamathambo ingathetha inkululeko yolu hlobo kuba inxulumene neentaka. Iinyoni zibhekwa njengezilwanyana ezikhululekile kwaye yingako zikwazi ukundiza kwiindawo ezithile zehlabathi ukuya kwelinye. Iintlobo ezininzi okanye ezininzi zinokuthetha ngokufuna inkululeko.
Zonke ezi zinto kunye namathambo angasebenzisa ukumela izinto ezininzi nangona zincinci kunoma yiphina inxalenye yomzimba.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yamathambo amancinci amancinci kumadoda nabasetyhini.
I-Angel tattoo ayimangalisi ngenxa yeentsingiselo ezintle eziza nazo. Umele ubone i-angle eweleyo eneentsingiselo zayo. Kungakhathaliseki ukuba isithunywa sitsalwa njani kuwe, sinika intsingiselo ekhethekileyo. I-angel tattoo ayimelanga izinto ezimbi. Bathetha malunga nokuma ngaphaya kwemingeni okanye ukuhamba ngaphaya kweengxaki ebomini. Nazi ezinye zeentsingiselo eziza kunye neengelosi ze tattoo.
Intsingiselo yeengelosi inokutshintsha kwakhona ngendlela umntu ogqobileyo ayisebenzisa ngayo. Ubumnono nobumnxeba bunokumelwa ngengelosi kwabasetyhini ngelixa amadoda angenza ngokwezifiso isithunywa ngendlela abayifunayo. Ngamaphiko, iingelosi zimelela into eyahlukileyo. Ingelosi inokufakwa kuyo nayiphina isimboli ukwenzela ukuba ibe nenjongo ekhethekileyo. Xa uhamba ngelosi yakho yombhalo, kuyimfuneko ukuba unengcamango elungileyo yokuguqulela ingelosi yakho kwinto ofuna ukuba ithetha ngayo.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yezithunywa zezulu zengcinga zamadoda kunye nabasetyhini.
I-tattoo ye-Ancho imele ifanekisela amandla kunye nokuzinza. Ngaba ubonile umboniso we-anchor ngaphambili? Le tattoo yaqalwa iminyaka emininzi edlulileyo yiSomeriya. I tattoo iye yaba enye yeempawu zokudala zehlabathi kwaye yayisetyenziswa ngamaKristu okuqala. Oku kwakukho xa betshutshiswa ngenxa yeenkolelo zabo. Iquka inkonzo ye-maritime kwi-arhente yokuthungela ulwandle njenge-navy, amandla, ukhuseleko kunye nokhuseleko,
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango ye-tattoos design kwindlela amadoda kunye nabasetyhini.
Arrow Tattoo Tshintsha
Umlambo ubizwa ngokuba ngumqondiso weNative America kwaye uye waba ngenye yezinto ezibhekiselele ku tattoo. Xa utolo luwela, lithetha ngohlobo kunye nokuba lunokuthi lucinge njengamandla xa kuluhlu. Xa utolo luwela idayimani, lwaziwa njengenkalipho ngelixa umcibisholo wedwa ubizwa ngokuba ukhuseleko kunye nokukhusela.
Xa idityaniswa ngesimboli sedayimani, ingaba nesibindi njengoko umntu ehamba phambili. "Bathi kwakhona, iintolo zodwa zimela ukukhusela nokukhuselwa kwingozi. Inokusetyenziswa kwakhona njengophawu lokuhamba okanye ulawulo. Iingcambu zikwazi ukupholisa kwaye zikwazi ukulungiswa ngokubhekiselele kwinkcazo yeengubo. Umbala, ukutyikitya kunye nendlela edibeneyo yinto eyenza itekisi yintsimbi ibe yenye yeyona nto ibhetele kumzimba womzimba. Ngomtsalane wokutsala, inkunzi okanye ibhinqa inokuthabatha izinto ezintle ukujonga i-chic. Imfumba yeentolo ezihlanu zimelela amandla, kodwa itolo enye iya kuphuka kalula. Imfumba yamacolo iyanzima ukuphula. Iingcambu ziyaziwa ngokuba ngumthombo wamandla kulabo bafuna iindlela zokulawula ukwesaba kwabo nokuma ngaphandle kwesihlwele.
Cofa apha ukuze ukhangele i-tattoos design design malunga namadoda nabasetyhini.
I-butterfly ithetha ngokomoya nangothando. Iyakuchaza i-psyche kunye nothando, umnqweno kunye nothando. Ibhabhathathane lihle kakhulu kwaye libalabala, isizathu sokuba amaninzi amaninzi aya kuhlala efuna ukuwafaka emzimbeni. Ubungangamsha kunye nokuzikhukhumeza kuqhubeka xa iinki iyamangalisa. Ngumsebenzi womntu ogqirhayo ukugqiba apho kuyobekwa khona tattoo.
Cofa apha ukuze ukhangele i-butterfly tattoos ingcamango yombono wamadoda nabasetyhini.
I-Cherry i-tattoos ibonisa intsingiselo
I-Cherry i-tattoos i-blossom ibonisa ukuhlukana kobomi kunye nokuthetha ngokuhle. Abasetyhini bayakuthanda kuba kuthetha kakhulu ngabo. Kuphefumlelwe kubafazi abafuna iindlela zokuxelela amabali abo kwihlabathi. Xa ukhetha i-tatry blossom tattoo, uthetha ngokulahlekelwa uthando kwabanye abamele ukuba bafelwa. Iza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobunjwa kwaye ngokukodwa kwenkcubeko apho yafunyanwa khona. Uninzi lwabantu abathanda tattoo banokulusebenzisa lubonise izinto ezininzi.
Namhlanje, nangona amadoda ayinki le tattoo yentyatyambo ebomvu ukuze abonise indlela enokubakho ngayo xa kuvela ekuthandeni amaqabane abo. Kananjalo ukudibanisa kunye namaqabane abo njengoko uthetha ngeLuck, Love, Impermanence, Ingqibelelo, Ubuhle, ukuThathaka, amandla, ukuChobisa, ukuvuselela, ukuguqulwa nokuPhuma. Ientyatyambo zikwafana nokuhlaziywa okubonakala kwintwasahlobo. Njenge-harbinger yentwasahlobo, iintyatyambo ze-cherry zifanekisela ukuvunwa okulungileyo, ukukhuselwa kwezityalo kunye nokubuya kwezinto ezinobomi emva kokushisa okukhulu. Isimboli yinto enye eyenza tattoo ibe yintandokazi yabantu ikakhulukazi abasetyhini.
Cofa apha ukuze ukhangele ijeyri yentyatyambo yembonakalo yombono wendlela yokulungiselela amadoda namabhinqa.
Esinye sezizathu zokuba abantu baye kwikhampasi yombonakaliso ngenxa yento emele ngayo. I-Compass tattoo ineentsingiselo ezahlukeneyo kodwa kulabo abasemanzini, kubaluleke kakhulu. Kuthetha uphawu lokufumana inhlanhla, ukukhuselwa kunye nenkxaso. I tattoo ivela kwiintlobo ezahlukeneyo kunye nezitayela. Kukho iintlobo zezi tattoos ezinenkcazo ezininzi kumntu onxibayo. Ukulandela iphupha lakho ngenye yeentsingiselo zakho. Akukufuneka uhambe kude ukuze wenze isimo sakho ebomini esaziwa kwabanye. Ngaloo tattoo, kulula ukuba uxelele iindaba ibali lakho ngaphandle kokwenza isandi.
Umzobo kunoma iyiphi nayiphi inxalenye yomzimba we tattoo uyitsho ngesibindi ukuba kutheni ungenayo itekisi kwimeko yokuqala. Imela ulwalathiso kunye nolwalathiso, kunye nesibonakaliso senhlanhla. Esi sizathu sokuba kutheni izinto ezininzi zeefomasi zibonwe zidweliswe kwiinqanawa. Ukuthandwa kwe tattoo yinto enokuyixabisa xa ubona nayiphi na. Le mihla, akusekho amadoda asebenzisayo kodwa kunye nabafazi abafuna ukujonga imfashini.
Cofa apha ukuze ukhangele i-compass tattoos design idea malunga namadoda nabasetyhini.
Iyintoni intsingiselo yale tattoo? Uninzi lwabantu lunentsingiselo eyahlukileyo kwi tattoo yer dragon. Nangona kunjalo, i-iconic tattoo design ingathetha iindaba ezilungileyo, inhlanhla, ukukhusela nokuchuma. Kukho ezinye iintsingiselo ezinjengomlingo, ingqiqo, umlwi, ukuhaha, amandla, ukuzala, ubumbano, ubulumko, amandla, ukuvutha, ukomoya, ulonwabo kunye nezinye iinguqulelo.
Kukho kuphela amathandisi ambalwa awenza ukuba ufuna ukuyeka kwaye ufuna iinguqu zabo. Enye yee tattoos yile tattoo enesiganeko ezayo ngokuhlukahluka kunye nezitayela .Isichaza sentsingiselo sivela kwiimilo ezahlukahlukeneyo ngelixa liyinki emzimbeni. Abanye abantu bongeza imibala kwi tattoo yabo yer dragon ukwenzela ukuba ibonakale ikhethekileyo kwaye ihlelwe ngokweenkcukacha zabo. Le tattoo ingafakwa kuyo nayiphi na inxalenye yomzimba yaye iya kuxelela ibali ukuba lithetha ukuthini. Ukubaluleka kunye nenjongo ye tattoo yinto ebangalisa abantu abaninzi abathandayo ama tattoos amakhulu kuwo.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yamatye edizayini yamadoda kunye nabasetyhini.
Intsingiselo yendlovu yeendlovu ineentsingiselo ezahlukeneyo kubantu abahlukeneyo. Indlovu ingathetha uxolo, amandla namandla. Kufanekisela abo bafuna ukunxibelelana, ubulumko, inhlanhla kunye nempumelelo. Abanye abantu bacinga njengento yokuzala xa abanye bethatha njengokuzinikela, ukucingisisa, ukunyamezela nokuzingca.
Izindlovu zikwaxutyushwa kunye namafu kunye nokuchuma, ubuqaqawuli, ulonwabo, imemori, ukuzimisela nokungabonakali. Izitopu zeNdlovu zivela kwiimo ezahlukeneyo kunye nobukhulu. Nangona kunjalo, ngumsebenzi womntu ogqibeleleyo wokugqiba isigqibo sokuba uya kufakwa nini. Wonke umntu othanda le tattoo ukhetha oko kukuthetha kwaye unokukuxelela kuphela apho basebenzise itottoo endaweni abaye bayinayo. Indlovu imele ukuPhuma, iMemori, ?? Lonwabo, ?? Ubungqina, ?? Ukuzimisela, ukuVunjwa kunye novelwano.
Amandla, amandla, Impumelelo, iNtsapho, uLuntu, uMama, Inhlanhla, Ubulumko, uLonxibelelwano noXolo ngamanye amanani obume bendlovu. Izindlovu zizinye zezilwanyana ezigqibeleleyo ukuba ungenayo inkwenkwe emzimbeni wakho kwaye ube nomvakalelo ovuyolayo owenza ukuba ufuna ukubonisa itekiti naphi na apho ungaphakathi. Ukubekwa kungenziwa kwiphina inxalenye yomzimba. Kwakhona, kukho iindlela ezahlukeneyo apho indlovu inokutsalwa khona emzimbeni.
Cofa apha ukuze ukhangele iimbono zendlovu zakamuva zengcamango yoluntu lwamadoda nabasetyhini.
Cofa apha ukuze ukhangele i-koi yeentlanzi ze-tattoos ingcamango yecandelo lamadoda nabasetyhini.
I-Lion Tattoo ithetha
Ingonyama yengonyama isoloko ibukeka inzima kwaye ithetha ngekratshi, isibindi, ubukhosi kunye namandla. Kukho iintlobo ezahlukeneyo ngokwezithethe. Inkunzi inokuthi ukucoceka, amandla, ubugqili, isibindi, ukunyaniseka, ukuzithoba, ukukhusela, ukunyaniseka, amandla, ubuqotho kunye negunya. Intsingiselo yombonyo wengonyama ibaluleke kakhulu, isizathu sokuba kutheni abantu abaninzi behlala befuna ukwazi ukubaluleka kwento abayiyo. Ubugcisa bubuhle kwaye bunokubambisa naluphi na ubugcisa bomzimba kwanamacala amancinci njengeminwe.
Iingcamango zokuthetha ngeengonyama zenza ukuba enye yezona tattoos ezilungileyo zibe yinki. Iingonyama ezimbini ezibuyiselwa emuva zixelele malunga nokuphuma kwelanga nokutshona kwelanga okanye nokuba iMpuma iza kudibana neNtshona. Inkunzi inokuthetha ngesikhokelo kwaye ibonakala kwezinye indawo ezingcwele okanye ezihloniphekileyo emhlabeni jikelele.
Imibala eyenziwa ngombala kunye nokunquma izinto ezininzi. Unokugqiba isigqibo kunye nombala we tattoo. Ukwenziwa ngokwezifiso kubaluleke kakhulu ukuba yisiphi isizathu esibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zeengonyama kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba. Ubuchule bokubhala tattoo buyamangalisa.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yeengonyama zengxowankulu yamadoda kunye nabasetyhini.
I-Lotus tattoos inokuba yinkimbinkimbi kwaye i-tattoo yayo yenzelwe ukuba yenzeke ngokumangalisayo. Imibala ye tattoo yintoni eyenza i-lotus tattoo iintsingiselo ezahlukeneyo. I-lotus e-White ikhuluma ngengqondo nangokomoya. Ithetha ngokuphelela nokucoca.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeettoti ongazisebenzisa ekutshintsheni indlela obukeka ngayo. Thatha u mzekelo, iintsiba eziza kwiimo kunye nobukhulu obuhlukeneyo. Akukho nxalenye yomzimba engafanelekiyo. Yintoni intsingiselo ye tattoo? Uninzi lwabantu luneentsingiselo ezahlukeneyo. I-Lotus tattoo zifanekisela ukuba yiyiphi isizathu esenza abantu bakwazi ukuhamba nabo ngokukodwa abo banokwenene abanentsingiselo enkulu kule tattoo ethandekayo. Inokutsalwa kunye nentlanzi ye-koi ukwenza enye intsingiselo ebalulekileyo yothando, impumelelo, inhlanhla, ukukwazi ukujamelana nezithintelo kunye neengozi.
Cofa apha ukujonga i-lotus tattoos design idea malunga namadoda nabasetyhini.
Iintsingiselo zeentlanga zeTattoos
I-tattoo yamathambo ingathetha inkululeko yolu hlobo kuba inxulumene neentaka. Iinyoni zibhekwa njengezilwanyana ezikhululekile kwaye yingako zikwazi ukundiza kwiindawo ezithile zehlabathi ukuya kwelinye. Iintlobo ezininzi okanye ezininzi zinokuthetha ngokufuna inkululeko. Kwakhona, iintsiba zithetha ngokulinganayo malunga nenxalenye yokuhamba, iingcamango, ukukwazi ukusebenzisana nokuqonda. Iintsiba zingabonisa abo badlulileyo, ukunxibelelana nabafileyo.
Iimpawu zamathambo zizinye zeettoti ezigqibeleleyo onokuzibonayo. Akunqabile kwaye kuyimfuneko. Akubona wonke umntu oyawabona le tattoos. Xa ukhangele umzobo we tattoo ukufuna inkululeko yakho, le tattoo yinto enye yokuhamba ngenxa yobuhle kunye nokubaluleka. Zibonisa izipho eziwela esibhakabhakeni. Iintsiba zithetha inkululeko, ukunyaniseka, ukukhanya, ukukhawuleza, ukuphakama, ukuhamba, umoya ophezulu, iingubo, ukucoceka, isibindi, isithembiso, ubugqili, ithemba, ukunxibelelana kolunye uhlangothi, Uhambo lomphefumlo, Ukuhamba, uMlingo, ukuLungisa kunye nobuthathaka. AmaTattoos aklanyelwe kakuhle ukuba anike ukuba ungubani loo nto oyifunayo. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeettoti ongazisebenzisa ekutshintsheni indlela obukeka ngayo.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yeengcambu zamathambo kunye neengcamango zomntu kunye nabasetyhini.
I-tattoo ye-Owl yilabo abathanda imfihlelo yombundu okanye omnyama. I-tattoo ye-Owl isetyenziselwa ukumela ubusuku bokuthunywa kunye nommandla walezo zinto ezingaziwa.
I-Owl ibonisa ithemba kwixesha elinoyikisayo okanye elikrakra. Ingqiqo enamandla yesikhomba ebusuku ngenxa yombono wayo omangalisayo uyabathanda abantu. Kungathetha ubungqina bokuba kukho ukukhanya ekupheleni kwetoni. Intsingiselo ye tattoo ingaba namandla, umlingo, iphupha, ukucaca, ukhokelo, intuition, ubulumko, ukuqaphela nokukhusela.
Kwakhona kuthetha ukuxhamla uMicro, amandla kunye namaphupha angcono. Isibhokhwe sinokutsalwa ngeendlela ezininzi kwaye ziphelela ngeentsingiselo ezinkulu ozithandayo. I-owl tattoo ingaba isikhumbuzo somntu ofa kunye nokuba sonke sifanele siphile kulo mcimbi ngokuzeleyo.
Iimpawu zeebhokhwe nazo zithetha zabo njenge-tattoo ethandwayo ethandwayo edlalwa ngokuba yi-mexican owl tattoo okanye i-candy candy tattoo. Thatha umzekelo abantu baseMexico bawuthanda umhla weT tattoo ngenxa yendima ebeka kuyo. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuba umntu akwazi ukuwudweba lo mzimba ukuba enze umehluko. Ekupheleni kosuku, ngumgcini, ngubani ongakwazi ukuthetha ngokulula ngento ethathwa ngayo itekisi.
Cofa apha ukuze ukhangele i-owl tattoos design idea malunga namadoda nabasetyhini.
Rose Tattoo lithetha
URose ubonisa uthando. Abo ba thandayo bangakwazi ukubona ngokucacileyo nge tatto rose. Xa ivuko ingekho ngameva, kuthetha ukuba akukho mnikelo oza kwenziwa xa uthanda kwaye ke, xa kukho uvava, kuthetha ukuba kukho umnikelo. Ubuhle obungapheliyo yinto ephakanyisiweyo inokuthi ukuthini kwabanye abantu. Abanye abaloloshe bakhetha le tattoo ngenxa yeenjongo zayo ezizodwa. Kudibaniswa nobufazi obubhekiselele kubasetyhini abazodwa abasalayo ngexesha lohambo. Kwaye abanye oothixo bachongwa ngale tattoo. I-Rose ingasetyenziselwa ukuthetha ngokulinganisela. Kukho iintsuku apho iirase ziphela kubafazi.
Namhlanje, kwanamadoda ayinki le tattoo ukuze abonise indlela enokubakho ngayo xa kuvela ekuthandeni amaqabane abo. Lithetha ukuthandana, ukuvuswa nokuzalwa kwakhona, ukomoya kunye nomoya, ukuguquka, ukomoya kunye nomphefumlo, ububele kunye nobufazi. Ubungangamsha kunye nokuzikhukhumeza kuqhubeka xa iinki iyamangalisa. Ngumsebenzi womntu ogqirhayo ukugqiba apho kuyobekwa khona tattoo. . Ubugcisa bubuhle kwaye bunokubambisa naluphi na ubugcisa bomzimba kwanamacala amancinci njengeminwe. Ukubaluleka kwendawo yombonti kuxhomekeke kwindlela umntu onayo ayicinga ngayo.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yokubumba kwimiyalezo yamadoda kunye nabasetyhini.
Umzobo wobuhlanga ubonisa amandla okanye isibindi sokunqoba izithintelo. Intsingiselo yesizwe ivela kwiinkcubeko okanye kwindawo okanye kwendawo. Kwaqala kwiintsuku zakudala xa abanye abantu befumana ukuchonga kwabo ngokusebenzisa amathambo. Itheyibhile yeentlanga isetyenziselwa ukuthetha ngeenkolelo zomoya okanye zonqulo. It isetyenziswe njenge-camouflage okanye ukukhuselwa. Kwakhona kusetyenziswa amabali okuxelela ukuba akukho mntu unokukwazi ukuxelela ngaphandle kwesizwe esivela kuyo. Akukufuneka uhambe kude ukuze wenze isimo sakho ebomini esaziwa kwabanye. Ngaloo tattoo, kulula ukuba uxelele iindaba ibali lakho ngaphandle kokwenza isandi.
I tattoo yesizwe inentsingiselo eninzi kwaye ibonisa ukutshatyalaliswa. Isangqa kwi tattoo sithetha ngokugqibelela kunye nokulinganisela kunye nokuphakade, xa ukhangela ibanga lonke indlela ukusuka kwinqanaba ukuya kuwo onke amanqaku. Ininzi inkolo iyayisebenzisa ukuthetha izinto ezininzi kubathembekile babo. I tattoo ibonisa inhlonipho, inhlonipho, ububele, ukunyaniseka, ukunyaniseka kunye nentliziyo. I tattoo isetyenziselwa ukuthetha ngokukrakra, amandla kunye nobutyebi. Ingabonakaliswa kwizinto ezingabonakaliyo kwaye eziyingqayizivele njenge-octopus, i-koi fish kunye ne-octopus ukumela ukhuseleko, uncedo kunye nesibindi.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yamathambo esandulweyo yamadoda kunye nabasetyhini.
I-tattoo ye-Wolf ingasetyenziselwa ukuthetha ngabafuna inkululeko. Umboniso uphinde uthetha uthando kunye nentlonipho, amandla kunye nokuthembeka. I-Wolf ingabhekisela kwintlango, intsapho, amandla, isiza, ukhuseleko, inkululeko, ukusinda kunye nezinye izinto ezininzi. . Kwi-lore yaseSiberia, ingcuka iyabizwa ukuba ikhusele ukungabikho kobantwana - kwaye imenywa ngokukhethekileyo ukuqinisekisa ukubeletha okunempilo. Kwi-Eurasia yakudala, ingcuka yayingumkhuseli weemfihlelo. Kubonakala ukuba ukuba uthe waluzisa imfihlelo yakho, wawukhuphe umthwalo wokuwuthwala xa inkomo yayiza kukhusela ulwazi ngonaphakade.
Abantu abaya kwi-tattoo ingcuka abalawulwa yintliziyo ngenxa yokuba bakholelwa kwimvelo. Abathandi bayayinayo le tattoo ukubonisa indlela abanamandla ngayo. Ingcuka ikholelwa ukuba ngabakhuseli balabo bafe. Esi sizathu sokuba bavame ukubonakala emangcwabeni okanye kumangcwaba.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yeengcuka zemizi yokuloba kwindoda nabasetyhini.
iipattoosiifatyambo zeentyatyambotattoos ezinyawoiimpawu zezodiac zempawui-tattoosI-Ankle Tattoosizithunywa zezuluizifuba zesifubacute tattoostattoostattoo yedayimaniizigulaneutywala tattooiifoto eziphakamileyotattoos kubantutattootattongombonoowona mhlobo womhlobodesign mehnditattoostattoos zohlangatattootatto tattoosiidotiIintliziyo zeTattoostattoos zenyangaIndlovu yeendlovuIintyatyambo zeTattoozomculo tattoostattoosiifotto zentamosibinitatna tattootattoos zelangazinyoniukutshiza amathamboicompass tattootattoo yamehloihoi fish tattooi tattootattoos kumantombazanaTattoos zeJometrizengalo zengalotattoosbathanda i tattoostattoo engapheliyoi-cherry ityatyambongesandlatatto flower flower